एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २६ माघ २०७७)
बैंकले गत आवको मुनाफाबाट यस वर्ष शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैैंकको चैत २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र बैंकको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् । बैंकले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १७ दशमलव १ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ९ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि वितरण गरेको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ८१ करोड ११ लाख २१ हजार रहेको छ । १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि पुँजी रु. ९० करोड ८४ लाख पुग्नेछ । बोनस शेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न विक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ५६३ कायम भएको हो ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा कम्पनीको हालको प्रवृत्तिमा निरन्तर हुने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रलजोन ३० दशमलव ९६ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ३० दशमलव ९६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव मध्यम रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । मंगलबारको शेयर मूल्य रु. ५६३ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ४९० मा टेवा पाउने देखिन्छ । कम्पनीको यस दिनको शेयर मूल्य ६० दिनयताकै उच्च रहेको छ ।